Volley – CCC Zone 7: tsy navelan’ny GNVB hivoaka ny taniny ny amboara | NewsMada
Volley – CCC Zone 7: tsy navelan’ny GNVB hivoaka ny taniny ny amboara
Tompondaka ny CCC Zone 7, andiany faha-25, teo amin’ny sokajy lehilahy, ny ekipan’ny zandary, GNVB. Fifaninanana nifarana, omaly, alahady teny amin’ny lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina.
“Fandresena ho an’ny Malagasy rehetra ny nandrombahan’ny Gnvb ny amboara. Mafy ny ady, saingy niezaka mafy ny mpilalao tsirairay”, io no nambaran’ny filohan’ny klioban’ny zandarimariam-pirenena, Rakotomalala Hery, taorian’ity fandresena goavana ity. Fandresena niadiana mafy hatrany am-piandohan’ny lalao ka hatramin’ity lalao famaranana ity. Raha hiverenana ity famaranana teo amin’ny sokajy lehilahy ity, nomontsanin’ny ekipa malagasy tamin’ny seta 3 no ho 1 (25/19 19/25 25/15 25/22), ny ekipa maorisianina, Olympique Montagne Goyave. Ity farany izay efa ekipa henja tokoa rah any fahaiza-manaony no jerena. Tsy nisy nahatosika azy avokoa ireo ekipa rehetra nifandona taminy, tamin’ity CCC Zone 7 ity. Tsy nahakivy ny gasy anefa izany fa vao nanomboka dia nahazo aina ny ekipan-dry Andry be ka azony mora foana ny fandresena tamin’ny seta voalohany (25/19). Somary natoritory anefa ny ekipa malagasy tamin’ny seta faharoa, maro loatra ihany koa ny “faute direct”. Nanome valin-kafatra ry zareo Maorisiana ka azony, araka izany, ny seta faharoa. Nifoha tamin’ny torimasony anefa ny Gnvb ka norombahiny ny seta fahatelo sy fahefatra.
Tsy mijanona hatreo fa mila tohizana ny ezaka, hoy ny filohan’ny Gnvb. Lalao sarotra ny volley ball, mila milofo ny mpilalao malagasy, na lahy, na vavy, indrindra ao anatin’izao fanomanana ny lalaon’ny nosy izao, hoy hatrany ity filoha ity. Mila mifanome tanana, na ny mpitantana na ny mpilalao, hoy izy.
Tsara ny manamarika fa nisongadina tokoa ity ekipa tompondaka ity satria azony avokoa ny “meilleur attaqueur”, ny “meilleur défenseur” ary ny “meilleur serveur” tamin’ity andiany fah-25 ny fiadiana ny amboaran’ny klioba tompndaka ny faritra faha-7 ity. Voka-dalao hafa indray, laharana fahatelo ny JSA rehefa avy nifanandrina tamin’ny ekipan’ny Camps Ithier. Laharana fahefatra kosa no misy ny ekipa vehivavy, Bi’as, rehefa nolavoin’ny Anse Royale.
Tinoka Roberto, Minisitry ny Tanora sy ny Fanatanjahantena : “Miarahaba manokana ny ekipan’ny GNVB nitondra avo ny voninahi-pirenena malagasy tamin’ity fiadiana ny amboaran’ny klioba tompondaka ny faritra faha-7 ity. Antsika Malagasy rehetra ny fandresena. Ny Minisitera dia vonona mandrakariva hanohana ny mpanao fanatanjahantena malagasy rehetra mba hahazoana vokatra tsara, toy izao, hatrany ».
Randriamandimbisoa Jocelyn, filohan’ny FM, Volley ball: « Fahombiazana no hita nandritra ity lalao goavana notontosaina teto Madagasikara ity. Tsy mora ny mandray fifaninanana toy izao. Miarahaba ny ekipan’ny GNVB tamin’ny fandresena azony ary hirariana ny hitohizan’ny fahombiazana ho an’ny mpanao fanatanjahantena malagasy rehetra, indrindra ny eo amin’ny taranja volley ball. Mitohy ny lalana ho an’ity taranja ity, miomana sahady amin’ny lalaon’ny nosy ankehitriny ny federasiona”.
Rakotomalala Hery, filohan’ny GNVB: ” Lasa lavitra ny ekipa malagasy raha mahay mifarimbona eo amin’ny taranja volley ball. Miantso ireo taninketsa isaky ny klioba sy ireo tanora manana halavana ho tonga hanatevin-daharana fa vonona ny hanampy azy ireo izahay. Taranja sarotra kanefa azo ianarana tsara ny taranja volley ball. Azo ireharehavana sy hampisongadinana tanteraka ny firenena malagasy. Mbola maro ny ezaka miandry, indrindra ny fanomanana ny lalaon’ny nosy, ny volana jiona izao”.
Ange, teratany malagasy milalao ao amin’ny Anse Royale: “Nahafinaritra ny fifaninanana notontosaina teto Madagasikara. Nisy ihany anefa ny lesoka teo amin’ny fandraisana sy ny fikarakarana, ka somary nampikorontana kely ny mpilalao. Na izany aza, faly fa azon’ny ekipanay ny fandresena. Nisy ny fahaizana miara-milalao teny ambony kianja ka antony nahazoanay izao fahombiazana izao. Tsy mora anefa ny niatrika ny mpifanandrina, nandritra ity fiadiana ny CCC Zone 7, andiany faha-25 ity.